एमालेको छालामा महेन्द्रबहादुरको रजाई « हाम्रो ईकोनोमी
नेपाली समाजमा एउटा उखान चर्चित छ– बाघको छालामा स्यालको रजाई । उखान कहाँ–कुन सन्दर्भमा मिल्छ ? भन्न सकिदैन, तर कर्णाली प्रदेशमा चरितार्थ भएको छ । एमालेको छालामा माओवादीको रजाई ।
केन्द्रीय राजनीतिको कोपभाजनमा परेको पूर्वएमाले समुह बुलबुले तालको स्थिर पानी बनेको छ । न सरकारपक्ष बन्न सकेको छ, नत प्रतिपक्ष, विलखबन्दको लाटीकोइली बनेको छ । प्रदेश संसदको आधा जनमत पूर्वएमालेको छ तर सरकार कांग्रेस मैत्री माओवादीको छ ।
कर्णाली प्रदेश संसदमा कुल ४० सिट संख्या छ । पूर्वएमाले समुहका २० सांसद छन् । तर मुख्यमन्त्रीको भाग्य चिट्ठा एमाले विरोधी महेन्द्रबहादुर शाहीलाई परेको छ । सानो सिट संख्या भएको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन पूर्वएमालेले धेरै कठिनाई गरेन् तर मुख्यमन्त्रीले बाह्य र आन्तरिक दुस्मण पूर्वएमालेलाई देख्ने गरेपछि कुर्मराजको मन कुरिन्छ । मुख्यमन्त्रीको यही दोषी चस्माले कर्णालीमा नेकपाको मन मिल्न सकेको छैन । एमालेको बैशाखी टेक्ने एमालेसँगै सौतेली ब्यवहार गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको चरित्रले आफैलाई भेरी किनारको एक्लो हुचरो बनाउँदैछ ।
मुख्यमन्त्री शाही पूर्वमाओवादीका लडाकु कमाण्डर हुन् । जतिबेला उनी लडाकु थिए, त्यो बेला मुख्य दुस्मण सेना र प्रहरीलाई मान्थे । तर, अहिले पूर्वएमाले समुहलाई बर्ग दुस्मण देख्न थालेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिको आर्शिरवाद पाएका शाही पूर्वएमाले समुहलाई विभाजन र कमजोर बनाउन तल्लिन छन् ।
मुख्यमन्त्री जनयुद्धकालदेखि नै एमालेका प्रखर विरोधी थिए । गृहजिल्ला कालिकोटमा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई छानिछानी भौतिक कारवाही गर्थे । पूर्वएमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले शाहीको एमाले विरोधी रवैया विर्सेपनि कुर्मराज शाहीले बिर्सेका छैनन् । महेन्द्रबहादुर शाहीले दिएका घाउ कर्मराजको शरिरमा अझै बल्झिदैछन् । तरपनि शाहीले सास्ती दिन छोडेका छैनन् ।
शाही पूर्वएमाले मात्र हैन, पूर्वमाओवादी सांसदका लागि पनि रुचिकर छैनन् । केही ब्यक्तिको आदेश र सिमित कोठरीबाट चल्ने गर्दछन् । नेकपाका ३३ सांसद मध्ये दुई तिहाई उनको विपक्षमा छन् तर आर्शिरवादले हुकुमत चलिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कोठरी अनौठो छ । बाह्य कोठरी पूर्वमाओवादीका शक्तिशाली नेताहरुलाई रिझाउने गरि बनाएका छन् । जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र आफु निकटका ब्यक्तिलाई राखेर बाह्य टिम बनाएका छन् । त्यो टिम नामको मात्र सल्लाहकार हो । वास्तविक सल्लाहकार कांग्रेसीजन छन् ।
‘नेकपाका मुख्यमन्त्री कांग्रेस सल्लाहकारबाट चल्छन्’ यो कुनै आरोप होइन । नेकपा सांसद र नेता–कार्यकर्ताले बुझेको तथ्य हो । एक प्रसंगमा नेकपाका प्रभावशाली नेता यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गरी भनेका थिए ‘को कांग्रेसी कार्यकर्ता हुन्, को सल्लाहकार ? छुट्याउनै ग्राहो छ ।’
राजनीतिक गठजोडको झस्केलाबाट छिरेरे मुख्यमन्त्री बनेका शाही कर्णालीका लागि आशलाग्दा अनुहार थिए । उनको अनुहार जति चम्किलो छ, ब्यवहार त्यति नै विभेदपूर्ण छ । उनले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिँदा कर्णाली भोक, रोग र बर्षाैदेखिको अन्याय कम हुने आँकलन गरिएको थियो । उनको आधा कार्यकालमा कर्णालीबासी न भोकले मर्न छोडे नत रोगबाटै बाँच्न पाएका छन् ।
कर्णालीका जिल्ला घुम्दा राजस्सी ठाँटमा हेलिकप्टरबाट पुग्छन् । तर कोरोनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पिसीआर मेसिन कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको दयामा सुर्खेत पुग्छ । नवराज विकलगायत ६ जना युवा तालिवानी शैलीमा हत्या गरिन्छ तरपनि छानविन नाममा समिति गठन गर्न संघ सरकार पर्खिनु पर्छ । तर मुख्यमन्त्रीले देखाउने सपना अन्तरिक्ष यात्रीको भन्दा कमजोर छैन ।
बर्दियाको भूरीगाउँबाट भेरी नदी पार गरेर सुरुड निर्मार्ण गर्ने ? भेरी कर्णालीको तिरैतिर चार लेनको सडक निर्माण गरी चीनसँग ब्यापारिक नाका खोल्ने ? यी सपना राम्रा हुन् तर कर्णालीबासीलाई त्यो भन्दा पहिले न्याय चाहिएको छ । रोग, भोग र शोकबाट मुक्ति चाहिएको छ । त्यो कर्ममा महेन्द्रबहादुरको आँखा गएन ।
राजनीतिक समुन्वय, सदाचार ब्यवहार, जनतालाई न्याय दिन नसक्ने मुख्यमन्त्री कर्णालीका लागि अभिषाप हुनेछन् ।